Abenzi beComputer yeComputer kunye nababoneleli | China Stainless Pet Kama Comb
Amacala eBrashi amaPhepha aBini
Ukugqiba i-Pet Comb
Stainless Pet Kama
I-Pet Paw Nail Clipeer
Isicoci sePaw Paw
Iziqhano zezilwanyana zasekhaya
Ifayile yesikhonkwane sePet
Iikhola zeenja zokubopha iiNwele
Iziqhano zeGloves Mitts Massage Isixhobo sokuhlamba umzimba
Ukuzilungisa iiGloves Mitts
Isixhobo sokuhlamba umzimba
Ibhulashi lezilwanyana zasekhaya
Ukhuseleko kumazinyo okuhlaziya
Iseti yeSikere sePet
Isikere esithe tye
Ukutya kwePet Bowl
Ibhotile yamanzi ePet
Izinto zokudlala zasekhaya
Ukudibana kwezilwanyana zasekhaya
Intambo Pet Toys
Izinto zokudlala zeRabha
Iingxowa zenkunkuma yeNja
Ukususwa kweenwele zasekhaya
Waste Bags wekhadi
Custom Heavy Duty Retractab ...
Ukucoca iibrashi zokucoca ...
Inja Enzima Yomsebenzi Inokutsalwa ...
Inja yeNja yeNkunkuma
Isixhobo seNja yePoop Poop
Pet Groomer Ukugqiba Kama
Esi sidlo sisixhobo esinzima, ubunzima obunzima, kodwa bomelele.Ine-aluminium ejikeleze umva kunye neAntatic static coating ukuze inciphise ukuma.
Isicoci sezilwanyana ezigqibezela ikama ngamazinyo entsimbi angenasici ajikelezileyo, ingena ngokulula kwezona dyasi zityebileyo.
Esi sigcini-sifuba sigqiba ikama sinamazinyo amxinwa kwaye abanzi.Sinokusebenzisa isiphelo esibanzi sokwahlula iindawo ezinkulu, kunye nesiphelo esimxinwa sendawo ezincinci.
Yikama yezilwanyana kufuneka kuyo yonke ingxowa yomgcini.
Metal Pet Ukugqiba Kama
Ikama yesinyithi yokugqiba ikama sisixhobo esibalulekileyo esinokugcina isilwanyana sakho sicocekile kwaye sisempilweni ngokususa ii-tangles, iimethi, iinwele ezikhululekileyo kunye nokungcola.
I-Metal isilwanyana sokugqiba ikama asikhaphukhaphu, kulula, kwaye kulula ukuyiphatha.
isilwanyana esenziwe ngesinyithi esigqibezela amazinyo se-comb sinezithuba ezahlukeneyo, Iindidi ezimbini zokuqhekeka kwamazinyo, Iindlela ezimbini zokusebenzisa, ezilula ngakumbi kunye nezisebenzayo.inokubonelela ngokuzilungisa okugqibeleleyo.
Stainless Inja Kama
Ikama 1.This yenziwa ngezinto steel stainless, nto leyo umhlwa kunye umhlwa-enganyangekiyo, yomelele, ixesha elide kwaye akukho lula ukuba ayaphule.
Inja ye-2 engenazintsimbi yenzelwe indawo egudileyo kunye nehlala ixesha elide, amazinyo ejikeleze inja ayizukukrwela ulusu lwezilwanyana kwaye iya kunika amava okuzilolonga ngaphandle kokulimaza isilwanyana sakho, ikwanokuthintela umbane ongashukumiyo.
3.Eli linqatha lenja lesinyithi linceda ukususa izinja kunye neekati, i-mats, iinwele ezikhululekileyo kunye nokungcola, ikwakhuthaza ulusu kwaye iphucula ukujikeleza kwegazi, ilungele ukugqibezela kunye nokucoca iinwele zesilwanyana sakho.
Stainless Kama For Pet
Le comb ye isilwanyana yakhiwe ngentsimbi ehlala i-stainless.
Ikama yentsimbi engenanto yenziwe isilwanyana ngokungcono kwaye ihlala intofontofo ixesha elide ngakumbi kunamanqatha emveli.
Le ikama yentsimbi engenanto yenziwe isilwanyana inamazinyo ebanzi, ilungele ukothula umatshini okanye ukunika imbonakalo egqityiweyo edyokweni, ikwafanelekile nakwezindawo zibuthathaka njengobuso kunye neempuphu.
Ikama lesinyithi lesilwanyana sasekhaya lilungele ukugqiba kunye nokugungxula, ukunika umntu omthandayo imbonakalo yobungcali.
Metal Inja Steel Kama
1.Amazinyo enkomo enja yentsimbi egudileyo anokukhusela ngcono ulusu lwezinja ngaphandle kokulimaza, esusa iitangile / imethi / iinwele ezikhululekileyo kunye nokungcola, ekhuselekileyo kulusu lwakho lwesilwanyana.
Inja yesinyithi yenqanawa yesinyithi yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu zentsimbi, ukuqina okuphezulu, akukho rusi kwaye akukho deformation.
Ikama yesinyithi yenja yesinyithi inamazinyo agqithisileyo kunye namazinyo ashinyeneyo. Amazinyo anqabileyo anokusetyenziselwa ukwenza iinwele zezinja kunye neekati, kwaye amaqhina eenwele abophekileyo anokulungiswa ngokulula yinxalenye eshinyeneyo.
Isinyithi sokuzilungisa izinja
Ikama yesinyithi yokulungisa inja ifanelekile ekucaciseni indawo ezinoboya obuthambileyo obujikeleze ubuso nemilenze, kunye nokudibanisa uboya obudibeneyo kummandla womzimba.
2.Ikama yesinyithi yokulungisa inja yinqaku ebalulekileyo enokuthi igcine isilwanyana sakho sicocekile kwaye sisempilweni ngokususa ii-tangles, iimethi, iinwele ezikhululekileyo kunye nokungcola, kushiya iinwele zakhe zihle kakhulu kwaye zi-fluffy.
3.Yilitha elula yokufumana ukungakhathali. Esi sisinyanzelo sokulungisa inja ukuze sincede inja ihlale phantsi. Amanqatha amazinyo ajikeleziweyo okuzilungisa ngokupheleleyo. Amazinyo anemiphetho ejikeleziweyo yokuthambisa kwaye avuselele ulusu lwesilwanyana sakho ngengubo ebonakalayo esempilweni.
Idilesi:Inombolo engu-8 yeNanguandu, iYuexi Idolophu, iSithili saseWuzhong, iSuzhou City, iJiangsu China